नेकपा सचिवालय बैठक सुरु : दुवै अध्यक्षसहित सबै सदस्य सहभागी
मङ्गलबार, १६ मंसिर, २०७७
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । पार्टीका दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठक सुरु भएको हो ।
दुवै अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सबै सदस्यहरु बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ ।
पटक पटक बैठक सार्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रयास सफल नभएपछि अन्ततः उहाँ बैठकमा सहभागी हुन सहमत बन्नुभएको हो । बिहानसम्म बैठक बस्ने कि नबस्ने र बैठकमा दुवै अध्यक्ष सहभागी हुृन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकसँगै समय जुधाएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेपछि अन्यौल बढेको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठक एक घण्टा पछि सारिएको थियो ।
बुधबार, ०३ मंसिर, २०७७, दिउँसोको ०१:३८ बजे
नेकपा बैठकमा केक काटियो
विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा केक काटिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलको ६२ औं जन्मदिनको अवसर पारेर वैठकको सुरुवातमै केक काटिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहमा पौडेलको जन्मदिनको लागि बालुवाटारमा विशेष केक मगाइएको थियो । पौडेललाई
विराटनगर । अवैधरुपमा जङ्गलबाट चिरान काठ चोरी तस्करी गरेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले मिक्लाजुङबाट बरामद गरेको छ ।मध्यराति १ बजेको समयमा मिक्लाजुङ्ग १ सुके स्थित छेडी सामुदायिक वनबाट चिरान काठ तस्करी भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले को १ त ८५५९ नम्बरको
जुवा मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
विराटनगर । जुवा मुद्दामा फरार रहेका १० जना अभियुक्तलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला अदालत मोरङबाट २०७१ जेठ २१ गते जरिवाना फैसला भई जरिवाना नबुझाई फरार भएका अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । अदालतले तोकेको जनही २०० रुपैयाँ
अनुगमनको पाखण्ड किन नि, मुख्यमन्त्रीज्यू ?
उनलाई देख्नेबित्तिकै उनीहरूमध्ये कोही धर्धरी रोए, कसैले डाँको नै छाडे र कोही भक्कानिए । कसैका गहमा भरिएका आँसु सजिलै देख्न सकिन्थ्यो । उनीहरूका अनुहारमा वेदनाका धर्साहरू किरिङमिरिङ थिए । आँखामा पीडाका अक्षरहरू, चालढालमा निरासाका भङ्गिमा र स्वरमा घातप्रतिघातका लय सहजै
नेकपा विभाजनको सम्भावना कमजोर
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको जारी विवाद सहमतिमा टुंगिन्छ वा विग्रहमा पुग्छ भन्ने कुरा यतिबेला आम चासोको विषय छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा पेश गरेपछि आगामी कदम
अपशब्द बोलेको निहुँमा हत्या: हत्यापछि अपहरणको नाटक गर्ने पक्राउ
विराटनगर । सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–२ का एक युवकको हत्या आरोपमा उनकै छिमेकी पक्राउ परेका छन् । सोमबार बिहान युवकको शव दुहवी–२ मा रहेको शुभलक्ष्मी उद्योगको पछाडि रहेको झाडीमा मृत फेला परेका १७ वर्षीय सुजननारायण चौधरीको हत्या आरोपमा छिमेकी २० वर्षीय
पिछडावर्ग र मधेशीबीच फरक
टेलिकमका अधिकृतपुत्रको अपहरणपछि हत्या
विराटनगर विमानस्थल अब यस्तो बन्ने
हत्या आरोपी विराटनगरका वडाध्यक्ष धरौटीमा रिहा
मुख्यमन्त्री राई र अर्थमन्त्री आङ्बोको यस्तो प्रेम ? (फोटो)
विराटनगरमा ‘रेमडिसिभिर’ को तस्करी